I-ozokerite kunye neparafini zizinto ezifana ne-wax, emva kokufudumeza kakhulu kwaye zithatha nayiphi na indlela, ngaphandle kokuba zinefuthe lokufudumala. Esi sisiseko sale nkqubo.
Indlela yokwenza iparfini yokumisa
I-parafini yokwambisa esiya kuyidinga:
500 igrama yeparafini;
250 gram ye-ozocerite;
I-Ozokerite, iparafini kunye neoli ye-oilcloth siza kuthenga kwiziko leziyobisi. Sitshisa i-parafini kunye ne-ozocerite, ngenxa yoko sibabeka epanini, kwaye kwelinye ityhuthana yelinye ububanzi obukhulu sityhala amanzi size sibeke ipake yokuqala kuyo, siyifake kwi-gas, sifumana ukuhlamba amanzi. Ukushisa kuze kube yilapho ozokerite kunye neparafini ziyancibilika ngokupheleleyo. Sifumana ubunzima obufanayo.
Ubunzima bamanzi ukusuka epanini kuya kuthululwa kwi-tray yokubhaka, igutywe ngeoli yelanga. Kwaye silinde xa iparfini iya kunzima. Kubalulekile ukuba akayi kutywala. Ubushushu balo kufuneka bube kwindawo engama-40 degrees, ukwenzela ukuba kufikelelwe umphumo wokwelapha. Ikhawuleza ikhuphe kwaye ngokukhawuleza xa iyanzima, kufuneka ikhutshwe kwi-tray baking.
Ukubambisa siza kulungiselela iingubo ezimbini zeoli, iingubo kunye ne-2 diapers. Sinqumle iparafini esele ikhuni ibe yizingxenye ezi-2, sibeka isahlulo ngasinye kwiolibha yeoli, siya kugoba izandla zombini ukusuka kwisikrini ukuya eminwe. Ukusuka ngentla ehlanganiswe kwi-diapers kwaye uyifake kwiengubo. Sifumana iziqendu ezine-i-parafini kunye ne-oilcloth, i-diaper kunye neengubo. Senza konke ngokukhawuleza ukuze iparfini ingadli.
Sibamba iparfini imizuzu engama-20, ngoko siyisusa. Ukuba ukugoba kwenziwa ngokuchanekileyo, isikhumba ezandleni zakho siya kujika kunye nokujuluka kuya kuvela. Sula izandla zakho. Emva kweparafini sigcina izandla zifudumele, ngoko siza kuzihambisa nge-ukhilimu. Ukugqitywa kweparafini kwenziwa ngeentsuku ezili-10.
Le nqubo iyamnandi, ekuqaleni kukho ukuchukumisa okuncinci, ibuyisela kwakhona. Ukwenza ukugoqa, udinga uncedisi, akukhathazi ukwenza oko ngokwakho. Le nkqubo isetyenziselwa iinjongo zonyango kunye nezococa. Ivuselela, inceda ngeentlungu ezidibeneyo, inomphumela onenzuzo kwesikhumba, iphucula isondlo kunye nokujikeleza kwegazi kwimizimba. Isiphumo asinakukwenza ulinde ixesha elide.
Indlela yokwenza iparafini?
Ukuba iiparafini idibene idibene kunye nokusikwa, kuya kunceda ukulahla i-cellulite kunye namanqaku atyula. Kwiparafini songeza i-apricot okanye i-peach oil oil, i-spermaceti, i-cocoa.
Ungayilungisa njani ukugoba?
Kwi-container ehlambulukileyo yokumisa ukushisa, sifaka iparafini kwaye siyichitha kwindawo yokuhlambela ngamanzi. Yongeza umnquma okanye i-peach oil, i-spermaceti kunye ne-cocoa ibhotela. Xa izixhobo zichanyiswa, zixube ngokucophelela ngentonga eyomileyo. Amanani anjengeendlela ezilandelayo: i-50 gram yeparafini, udinga ama-gram e-5 yebhotela, i-peach okanye ioli yeoli, i-sperm.
Umxube olungeleyo uya kupholisa encinci kwaye uphonononge ngebhasi ekhanda elomileyo necocekileyo. Siza kugubungela yonke ifilimu yokutya kwaye siza kulala phantsi kombhede, sifike ngengubo efudumele okanye ingubo. Emva kweyure, susa iparafini, uyisule umzimba kunye ne-napkin epholileyo kunye nokusila. Kwaye njengesiseko sisithatha nayiphi na iifuno okanye ioli yeoli. Kwipuniji yeoli ephantsi, thabatha amanqatha amathathu eoli efunekayo. Ngaphambi kokusetyenziswa, gubungela kakuhle ioli ye-massage.
Ekugqibeleni, sinokuyongeza ukuba kunokwenzeka ukuba kwenziwe iparafini ekhaya, le nkqubo ivuselela kwaye inondla ulusu.
Indlela yokuphucula ukutya kunye ne-hydration yesikhumba
Ukuphefumlelwa kweemvula: iindlela neengcebiso
Ukunyamekela kakuhle intanyeni kunye neendawo ezinqabileyo
Ukuhlamba ekhaya ukujongana nomzimba nomzimba
Ukunyamekela: izibhati, iimaski
Siyakhathalela isikhumba samatye
IJam kwi-melon crusts
I-Cocktail "uMargarita" kunye nepereji
Isithandwa sam sitsho, ndimele ndenze ntoni?
Indoda isabela njani kwiindaba zokuba ziya kuba nomntwana
Ukupheka i-pizza yangempela yaseNtaliyane
Inkukhu yenhliziyo kwi-multivark
Izitya zangasese kwietafile zokuzonwabisa
Ukupheka kwamachiza endabuko
Indlela yokugcina amazinyo akho aphile ngexesha lokukhulelwa?
Isaladi "I-White Birch" ephuma kwintambo yenkukhu
Ukuqokelela kwindlela yohlobo lwentsapho kubheka abafazi beeminyaka yonke ukusuka e-Econika
Okukhethwa kukho ukukhupha i-lavash rolls
Ukuchaneka njani ukukhulisa intetho kumntwana?
Umhle kangakanani umbala wamahhala?
Ungaphinda wenze ntoni kumdla kumyeni